Obodo mara mma na Obodo Valencian, site na Morella ruo Guadalest | Akụkọ njem
Louis Martinez | | España, Nduzi
Chọta obodo mara mma nke Obodo Valencian ọ bụ ihe kacha mfe n'ụwa. N'ala Levantine enwere ụfọdụ obodo kacha dị egwu na Spain na enweghị ihe ha ga -adọpụ, dịka ọmụmaatụ, ndị ị nwere ike ịhụ na Madrid (lee, anyị na -ahapụrụ gị akụkọ gbasara obodo dị na Obodo Madrid), en Aragon ma ọ bụ Galicia.
Ma ọ masịrị gị n'ụsọ osimiri ma ọ bụ ọ bụrụ na ị dabere n'ime ime obodo Obodo Valencian nwere ihe niile ị chọrọ. Ọmarịcha obodo nta ndị yiri ka a kpụrụ akpụ na nkume yana obodo ndị dị n'ụsọ osimiri nwere osimiri nwere nrọ na ọdụ ụgbọ mmiri mara mma. Ihe a niile ịghara ịkọ maka nnukwu ihe nketa nke ala ndị ahụ. Mana, n'atụghị egwu, anyị ga -egosi gị obodo ise mara mma na Obodo Valencian.
1 Obodo ise dị egwu na Obodo Valencian
1.2 Peñíscola, otu n'ime obodo mara mma na Obodo Valencian
1.3 Chulilla, onye amaghi n'etiti obodo mara mma nke Valencian
1.5 Ihe kacha mma
Obodo ise dị egwu na Obodo Valencian
Anyị ga -amalite njem anyị na ime ime obodo Castellon ileta Morella mere ihe akụkọ. Anyị ga -aga n'ihu na nke ahụ Valencia na anyị ga -akwụsị na nke Alicante igosi gị otu n'ime obere ihe ịchọ mma ya: Guadalest, kwupụtara saịtị akụkọ ihe mere eme ma tinye ya na mkpakọrịta Obodo Kachasị Mara Mma na Spain.
Dị ka anyị gwara gị, Morella nọ n'ime ime, na mgbago mgbago ógbè Castellón, yana akụkọ nwere akụkụ ya niile. N'ezie, ọ bụ otu n'ime obodo kacha mkpa na mpaghara Ikike, nke natara aha a n'ihi na ọ nọ n'okpuru ikike nke nnukwu nna ukwu nke iwu dịka Temple, Montesa ma ọ bụ San Juan.
Echiche dị mfe nke Morella adịlarị mma, yana oke ya ụlọ na -achị ụlọ ndị gbara mgbidi gburugburu gburugburu, yiri ka ha kwụkwasịrị na nnukwu okwute La Mola ebe ha nọ. Nnukwu mgbidi Arab nke narị afọ nke XNUMX nke mgbidi gbara ya gburugburu mejupụtara ụlọ dịka Gọvanọ Gọvanọ, olulu mmiri, ebe obibi dị iche iche na ụlọ elu Pardalea na Homage, n'etiti ndị ọzọ. Dị ka a ga -asị na nke ahụ ezughị, achọpụtala ebe ndị mgbe ochie sitere na Iberian, Roman na Visigothic na gburugburu nnukwu ụlọ. Kpọsị, nke ikpeazụ bụ otu n'ime ihe kachasị mkpa na mpaghara Mediterranean niile.
Mana ọ bụghị naanị ihe ị nwere ike ịga na Morella. Dị nnọọ ka ọ na -adọrọ mmasị archpriest ụka Santa María, nnukwu ụlọ Gothic nke na -echekwa windo iko nwere agba nke narị afọ nke XNUMX. N'etiti ihe ịchọ mma ọ na -ebi n'ime, bụ steepụ dị warara nke na -abanye na ukwe, nnukwu ebe ịchụàjà, akụkụ na eserese nke Sassoferrato.
Chọọchị San Juan, San Miguel na San Nicolás, ebe obibi ndị nchụàjà nke San Francisco, hermitage nke Santa Lucía na ebe nsọ nke Virgin nke Vallivana, nke dị ihe dị ka kilomita iri abụọ site n'obodo ahụ, emechara ihe nketa okpukpe Morella.
Mana ị ka nwere ihe ị ga -eme. Ndị Ọwa mmiri nke Santa Lucia Ọ bụ ọmarịcha ọrụ nke injin hydraulic n'ụdị Gothic, nke kansụl obodo bụkwa nke ya. Ọ nwekwara ọtụtụ manor ụlọ dị ka nke Kadịnal Ram, nke Cofradía de Labradores ma ọ bụ nke Marquis de Cruilles. Na, na mpụga obodo ahụ, ị ​​nwere ụlọ e wusiri ike nke Brusca na Creixell. N'ikpeazụ, n'ime Ọgba prehistoric nke Morella la Vella enwere eserese ọgba a na -ekewa dịka Ebe Ihe Nketa Worldwa.
Peñíscola, otu n'ime obodo mara mma na Obodo Valencian
Nnukwu ụlọ Peñíscola
Na -ahapụghị mpaghara Castellón nke Maestrazgo, mana ọ dịla na nsọtụ oke osimiri, ị nwere obodo Peñíscola, nke enweghị ihe ọ bụla ga -enwere anyaụfụ nke gara aga n'ihe banyere ịdị ukwuu ya na gburugburu eke eke nwere ihe ùgwù.
Banyere nke ikpeazụ, n'ime okwu ọchịchị ya agụnyere Sierra de Irta, otu n'ime ndị na -amaghị nwoke nke Obodo Valencian. Ọ na -agwụ, kpọmkwem, n'oké osimiri, na -akpụ oke ugwu dị egwu dịka nke ahụ Badum, ebe echekwara foduru ụlọ nche ochie.
Mana ị nwekwara osimiri ndị mara mma na Peñíscola. N'ime ha, ndị mepere emepe North na South, nke Viudas ma ọ bụ nke Pebret. N'aka nke ya, ama ama Snooker Ọ bụ nnukwu oghere dị n'etiti oke osimiri nke mmiri na -esi na ya apụta, n'oge udu mmiri.
Banyere ihe ncheta ya, nnukwu akara obodo bụ Llọ Papa Luna, ihe owuwu Templar nke na -achị ya site n'ugwu. N'ịbụ nke Romanesque, e wuru ya na ebe ewusiri ike ochie nke Arab ma nwee basilica n'ime. N'otu aka ahụ, otu ọnụ ụzọ ya, Fosc portal, bụ ugbu a otu n'ime ụzọ mbata Peñíscola. Dị ka akụkọ mgbe ochie, anyị ga -agwa gị na nnukwu ụlọ ahụ rụrụ ọrụ dị ka ntọala maka usoro na ihe nkiri. Ma eleghị anya, ndị kasị ama nke mbụ bụ Egwuregwu ocheeze.
I kwesịkwara ịga leta obodo Castellón the parish ụka Santa María, nke jikọtara Romanesque na Gothic na nke Alonso de Borja, Pope Calixto III nke ọdịnihu, ka a họpụtara bishọp. Na, n'akụkụ ya, akwụkwọ nri San Antonio na de la Virgen de la Ermitana, yana Ebe ngosi nka nke Oke Osimiri, nke ị nwere ike ịhụ njem nlegharị anya ọdịnala Peñíscola kemgbe oge ochie.
Chulilla, onye amaghi n'etiti obodo mara mma nke Valencian
Nlele nke Chulilla
Anyị na -ahapụ mpaghara Castellón iji rute nke Valencia wee gosi gị otu n'ime ihe ịtụnanya zoro ezo nke ala a. Anyị na -ekwu maka obodo Chulilla, nke dị na Mpaghara Los Serranos, ihe dị ka kilomita iri isii site n'isi obodo.
Ịma mma nke obodo a nwere ụlọ ọcha na okporo ụzọ dị warara dị egwu. Ọ dị na elu ugwu nke elu ya bụ nke ochie nnukwu ụlọ ndị Arab na nke ahụ na -enye gị echiche dị egwu. Mana, ọ bụrụ na obodo ahụ mara mma, gburugburu ya dị ọbụna karịa, yana ọwa mmiri dị elu karịa otu narị mita n'elu Turia River na ebe ndị dị ka Mmiri mmiri na-acha anụnụ anụnụ, ọdọ mmiri mara mma. Iji mara ha, anyị na -adụ gị ọdụ ka ị kpọọ ụzọ apịtị.
Na mpaghara, ọkachasị na ndagwurugwu FalfigueraỌbụna ị nwere eserese ọgba. N'otu aka ahụ, anyị na -akwado gị ka ị gaa na ụlọ ihe nkiri San Josepe na Santa Bárbara. N'ikpeazụ, ịlaghachi n'obodo, ị ga -agarịrị ụka nke Virgin nke ndị mmụọ ozi, wuru na narị afọ nke XNUMX na nke nwere ihe osise na eserese site na narị afọ nke XNUMX na XNUMX.
Ọgba nke Moors na Bocairente
Ọbụna ihe ịtụnanya karịa obodo gara aga bụ Bocairente, nke dịkwa na ugwu dị na mkpọda ugwu ọdịda anyanwụ nke Siera Mariola ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ narị mita asaa n’ịdị elu. Ihe a niile na -eme ka ọ dị mma maka ịmalite ụzọ ụkwụ.
Agbanyeghị, nnukwu mmasị Bocairente bụ obodo ochie ya, ekwuputara Mgbanwe nke Artistical Historical. Akụkụ dị mma nke ya mejupụtara Mpaghara La Villa, ntọala etiti oge ochie juputara na wara wara na okporo ụzọ. N'etiti akụkọ ihe mere eme nke obodo ị nwere ike ịhụ ụka nke Virgin of Assumption, wuru na narị afọ nke XNUMX, n'agbanyeghị na ọ jikọtara Gothic na Baroque.
Ihe ncheta okpukpe ndị ọzọ ị nwere ike ịhụ na Bocairente bụ ụlọ nsọ San Juan, Virgen de Agosto na Virgen de los Desamparados. Mana ihe na -achọ ịmata bụ ebe obibi ndị mọnk, ochie ndị nọn n'okpuru ala nke nwere ọbụna ụka.
Agbanyeghị, ikekwe akara Bocairente bụ ọgba ndị Moors. Ha bụ oghere oghere nke emepụtara na narị afọ nke XNUMX na XNUMX na mgbidi fọrọ nke nta ka ọ bụrụ narị mita atọ n'ịdị elu. Amabeghị ihe ha bu n'obi, mana echiche kacha anabata bụ na ha bụ ụlọ nkwakọba ihe siri ike.
Ọzọkwa site na islam oge bụ Ụlọ elu Mariola, nke dị n'elu otu aha na nke ahụ, nwekwara ọrụ nchekwa. Ị nwere ike ịrịgo na ya ma nwee ọmarịcha echiche. N'ikpeazụ, anyị na -adụ gị ọdụ ka ị gaa leta ehi na Bocairente, nke e wuru na 1843; snow nke San Blas nke ọma, ejiri ya mee ihe dị ka snowfield kemgbe narị afọ nke XNUMX, yana ụlọ nkwari akụ L'Agora, nke na-agwakọta ụdị Neo-Mudejar na ụdị nke Valencian Modernist.
Kansụl Obodo Guadalest
N'ikpeazụ, anyị na -abịa n'ógbè Alicante igosi gị obodo ọzọ mara mma na Obodo Valencian. A na -ahụ ya, ọkachasị na mpaghara mpaghara Marina Baja, n'ụzọ dị egwu n'etiti Oke ugwu Aitana na Xortá. Na, dị ka anyị gwara gị, e kwupụtara ya saịtị saịtị akụkọ ihe mere eme na nka na 1974.
Ọ dị ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ narị mita isii, nnukwu akara ya bụ obí eze san jose, ebe e wusiri ike Moorish nke narị afọ nke XNUMX nke na -achịkwa ndagwurugwu ahụ dum. Ọ bụghị naanị ya bụ onye nọ n'obodo ahụ. O nwekwara nnukwu ụlọ Alcozaiba, nke naanị otu ụlọ elu ka bụ mkpọmkpọ ebe.
Maka akụkụ ya, nke Chọọchị nke Nwanyị Nwanyị nke Mwere E wuru ya na narị afọ nke XNUMX ma ọ dị n'ụdị Baroque. Ụlọ mkpọrọ ochie nke iri na abụọ dị n'ala nke Ụlọ Nzukọ Alaeze na Ñlọ Orduña Ọ bụ ọmarịcha obí eze site na narị afọ nke XNUMX. N'ime, na mgbakwunye na eserese, ị nwere ike ịhụ nchịkọta seramiiki na -atọ ụtọ.
Nke a na -edugakwa anyị ịgwa gị gbasara ihe ọzọ dị iche iche nke Guadalest: ụlọ ngosi ihe mgbe ochie ha. O nwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ iri na ụfọdụ na-achọsi ike dị ka ndị a raara nye ihe nkiri na ụlọ nwa bebi, maka ihe ịta ahụhụ, obere obere ihe ma ọ bụ ụgbọ ala akụkọ ihe mere eme.
Na mmechi, anyị gosiri gị obodo ise mara mma nke Obodo Valencian. Mana ala Levantine nwere ọtụtụ ndị ọzọ. Dị ka ọmụmaatụ, Altea, ya na okporo ụzọ ya dị warara nke ejiri ụlọ ọcha mechie; Xativa, ya na nnukwu ụlọ ya; Villajoyosa, yana ụlọ ya pụrụ iche (lee ebe a akụkọ gbasara Villajoyosa) ma ọ bụ Sax, nke nnukwu ebe ewusiri ike mgbe ochie chịrị. Ịchọghị izute ha?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways Europe » España » Obodo mara mma nke Obodo Valencian